Maibahoaka-Ivato : Mpaka an-keriny roa voasambotra -
AccueilRaharaham-pirenenaMaibahoaka-Ivato : Mpaka an-keriny roa voasambotra
Maibahoaka-Ivato : Mpaka an-keriny roa voasambotra
12/06/2017 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Lehilahy iray sy vehivavy iray no voasambotry ny zandary teny Maibahoaka-Ivato, tamin’ny sabotsy hariva teo tokony ho tamin’ny 06 ora sy sasany, rehefa avy naka an-keriny mpivady tompona mpamongady iray, teny an-toerana. Araka ny voalaza, dia nitondra fiara taxi ” Mercedes Berling” nijanona teny amin’ny manodidina ireo olon-dratsy ireo. Raha iny avy nivavaka, nandeha an-tongotra hamonjy fodiana iny izy mivady, no nivoaka ireo jiolahy tsy latsaky ny dimy mitam-basy, ary nifandrimbona tamin’ny fisintonana sy fanosehana azy ireo hiditra tao anatin’io fiara io. Ilay ramatoa no azon’ ireo olon-dratsy raha toa ka nanohitra ilay rangahy vadiny, ka afaka nanavotra ny tenany. Anisan’ny nanosika azy mivady ireo hiditra tao anatin’io fiara io ity vehivavy iray voasambotra ity, saingy voasinton’ny vadin’ilay ramatoa ity farany ka tavela teo.” Nentin’io rangahy io haingana teny amin’ny fokontany io vehivavy io avy eo. Vetivety dia nitangorona ny olona ary saika hanao fitsaram-bahoaka, saingy soa ihany fa tonga ara-potoana ny zandray ka voasoroka izany”, hoy ny fanamariham-baovao azo.Nanenjika ilay fiara, izay lasa nirifatra nitsoaka nankany Ambohidratrimo kosa ireo zandary tonga teny an-toerana. ” Nivily lalana nankeny Ivato io fiara “Mercedes Berling” io, ary nandeha lalan-tany. Tsy lasa lavitra akory, dia nidona tamin’ny vato, ka nitokona tsy nety nandroso intsony. Nitsoaka ireo efa-dahy tao anatiny ka ilay ramatoa nalaina an-keriny sy ny saofera sisa no tavela “, araka ny voalaza hatrany.
Niantso ireo taxi namany, miasa eny amin’ny faritr’Ivato eny, mba hitondra ilay vehivavy nalaina an-keriny, izay naratra teo amin’ny handriny ilay saofera, ary tonga teny an-toerana izy ireo. Rehefa nahazo ny fitsaboana sahaza azy moa ireo olona roa ireo, dia nentina natao fanadihadiana teny amin’ny biraon’ny zandary. Tamin’izany no nilazan’ilay mpamilin’io fiara io fa tsy nahafantatra na inona na inona ny tenany, ary nahatsiaro voafitaka ihany koa. Nambarany, fa nambanan’ireo efa-dahy ny basy izy, ka tsy afa-nanaotra, fa tsy maintsy nanaraka ny baikon’ireo jiolahy ireo. Raha karàna no tena alain’ireo jiolahy an-keriny, dia efa iharan’izany hatramin’ny teratany malagasy ankehitriny. Fitiavam-bola daholo no ao ambadik’izany rehetra izany. Ny tena nahatalanjona ihany koa dia nifanandrify tamin’ny fotoana nisehoan’ilay tranga fanafihana mpamongady iray teny Sabotsy Namehana, izay nahafatesana olona iray sy nandrobana vola 25 tapitrisa Ariary ity zava-nisy teny Maibahoaka-Ivato ity. Mety ho tambazotran-jiolahy iray ihany ve izany no ao ambadik’izao tsy fandriampahalemana hita etsy sy eroa izao? Iza no jiolahy raindahiny amin’ny fiketrehana izany? Azo antoka aloha fa olon-dratsy efa tena za-draharaha no lohandohan’ny mpisorona ao, ary iza moa no mahalala raha ireto andian-jiolahy ireto ihany no isan’ny ao ambadik’ireny fakana an-keriny karàna nisesisesy teto andrenivohitra ireny? Mitohy ny fanadihadiana ary mbola notanana eny amin’ny biraon’ny manampahefana ireo olona roa ireo amin’izao fotoana izao, mandrapahitana ny marina momba ity raharaha ity.
Andry Andriantongarivo : Mersenera mpandrahona mpanao gazety
Tandindomin-doza tanteraka ny asa fanaovan-gazety ankehitriny. Mampiasa mersenera mitam-piadiana mantsy ny hainoamanjerin’ny mpanongam-panjakana, ka sahy mandrahona sy mampihorohoro mpanao gazety am-perin’asa tahaka izay nitranga tetsy amin’ny lapan’ny Antenimieran-doholona, ankoatra ny fandrahonana amin’ny alalan’ny facebook sy ...Tohiny
Fivoriamben’ny CPCCAF:TOMBONY HO AN’NY SEHATRA TSY MIANKINA
Hery Rajaonarimampianina : Filoha voalohany noraisin’ny Amperora Akihoto